Rugby – Fihaonana tetsy Mahamasina: foanana ny «licence»-n’ireo mpilalao | NewsMada
Rugby – Fihaonana tetsy Mahamasina: foanana ny «licence»-n’ireo mpilalao
Nomen’ny Malagasy Rugby sazy henjana ireo mpilalao nandray anjara, tamin’ny fifaninanana, nampanaovin’Analamanga Rugby. Ankoatra izay, miala ao anaty rafitra federaly ihany koa ny ligy.
Nanambara, tamin’ny feo hentitra sy mazava, Rakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby, omaly tetsy amin’ny foibe toerany etsy Ankorondrano, fa manala tena tsy ho anisan’ny mpikambana ato anatin’ny rafitra federaly intsony ireo mpikambana ao amin’ny ligin’Analamanga. Porofon’izany ny tsy fahazoan-dalana avy amin’ny Malagasy Rugby sy ny tsy fametahana ny anaran’ny federasiona teny ambonin’ny afisy misy ny lalao, izay rafitra faratampony amin’ny rugby eto Madagasikara.
Ankoatra izay, foanana ary tsy manankery ny kara-pilalaovana “licence”-n’ireo mpilalao rehetra nandray anjara tamin’ny fihaonana, nataon’ny ligy ny alahady 23 jolay lasa teo, tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Nambarany fa tsy nahazoana alalàna izany lalao izany.
Ny fiziriziriana mbola hampiasa izany dia mitarika any amin’ny fanomezana sazy henjana. Nomarihiny fa mitohy hatrany ny lalao karakarain’ny «comité ad’hoc», mba tsy hisian’ny taona fotsy.
Nomarihin-dRakotomalala Marcel fa fitsabahan’andraikitra «ingerence» ny fanapahan-kevitra navoakan’ny filankevi-panjakana «conseil d’etat». Nilaza moa ny tenany fa hifampiresaka mivantana amin’ny minisitry ny Fanatanjahantena mahakasika ity raharaha mampifanolana ny federasiona sy ny ligy ity. «Tsy marina ny filazana fa tsy mandeha ny rugby eto Madagasikara, satria mizotra araka ny tokony ho izy avokoa ireo fandaharanasa rehetra. Tsy maintsy vita amin’ny volana desambra ny fifaninanam-pirenena rehetra», hoy izy, namarana ny teniny.